Iflethi yePrimiyamu enamagumbi amabini kwiziko leSixeko kubandakanywa. Ipaki.
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguMika
Ibekwe kwindawo esembindini, elungiswe ngokupheleleyo kunye negumbi elibanzi ukuze ufumane amava awodwa kumbindi wedolophu yaseKuopio eneendawo zokutyela, ichibi, kunye nesikwere semarike yonke indawo. Yonwabela isauna enobutofotofo, igumbi lokuhlambela, indlu yangasese, igumbi lokuhlala, igumbi lokulala elikhulu elahlukileyo, ikhitshi. Lala kakuhle kwaye ulungele ukufumana i-Kuopio ibe yinto yokuzonwabisa okanye ishishini.
Uyonwabele i-balcony enkulu, esandula ukulungiswa ngokutsha ngokunxulumene nokulungiswa kwe-facade. Akukho zilwanyana zasekhaya zivumelekileyo; Akutshaywa okanye zihlangu ngaphakathi.
Akukho zilwanyana zasekhaya ezivunyelweyo ngenxa yokuba umninimzi uyalaliswa. Nceda uhloniphe isiko laseFinnish kwaye ungasebenzisi izihlangu ngaphakathi kwiflethi ukuze ungonakalisi umgangatho osandula kulungiswa.
Kunqabile ukuba ube kule ndawo isembindini esixekweni esineendawo zokutyela ezikufutshane nawe kwaye ube ufumana lo mgangatho wokuphila kwindawo ephangaleleyo kwaye ilungiswe ngokupheleleyo eyi-57,5 m2.
Ifumaneka ngefowuni okanye nge-imeyile ngexesha lokuhlala kwakho ukuze uqinisekise ukuba amava alungile.